တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျားသစ်စကတ်ကျားစီးအင်္ကျီကို ၀ တ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ INSTA အကောင့်တစ်ခုလုပ်ထားတယ် - သတင်း
တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျားသစ်စကတ်ကျားစီးအင်္ကျီကို ၀ တ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ Insta အကောင့်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်
မင်းကိုမထိတ်လန့်ချင်ဘူးဒါပေမယ့်ကျားသစ်ပုံနှိပ်ထားတဲ့ Midi-Skirt ကပ်ရောဂါရှိတယ်။ ဒီစကတ်ကိုမနှစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာပထမဆုံးခေါ်ခဲ့တာပါ '' က နွေရာသီ 2018 ၏စကတ်။ သို့သော်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအရလူတို့သည်၎င်းကို ၀ တ်ဆင်နေဆဲဖြစ်ပြီးလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသောဗိုင်းရပ်စ်သည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့သွားသည်
ငါဆိုလိုတာကစကတ်ကိုသင်သိတယ်။ ၎င်းသည်သြဇာသက်ရောက်သူတိုင်းတွင်အဖြူရောင်တီရှပ်၊ အဖြူရောင်သင်တန်းပို့ချများနှင့်လက်တွန်းအိတ်များပါ ၀ င်သည်။ ချယ်လ်ဆီးရှိသူတို့၏လှပသောအိမ်များရှေ့တွင်ဟန်ဆောင်ဟန်ဆောင်နေသည့်မိန်းကလေးများအပေါ်တွင်စကတ်စီးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာ 'မိန်းကလေးရဲ့ည' နဲ့ 'နေ့ည' မှာစန်းတိုင်းတိုင်းမှာတွေ့ရမယ့်စကတ်ပဲ
ယခုမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျားသစ်စကတ်စီးအင်္ကျီ ၀ တ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ Instagram အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ထားတယ် ။ ဒီအကောင့်သည်၎င်း၏ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းရုပ်ပုံ ၁၁၁ ခုတင်ခဲ့ပြီးနောက်လိုက် ၃၀၀၀ ကျော်စုဆောင်းထားပြီးဖြစ်သည်။
Greenpoint တွင် @julie__thomson မှတွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း (@leopardmidiskirt) ၂၀၁၁ ဇွန် ၁ ရက်၊ ညနေ ၅:၃၇ ၌ PDT တွင်
အရ The Cut, @leopardmidiskirt ဒီအကောင့်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကစခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်အရွယ် Rilka Noel ကထိန်းချုပ်ထားတယ်။
သူမသည်သူမ၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများကိုပြောင်လှောင်ထားသော Snapchats ၏စကတ်ကိုသူငယ်ချင်းများထံပို့ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီးသူမကရယ်စရာ Instagram အကောင့်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။
@tanyaburr ၏ @cornwellcat မှပို့ချချက်အားဖြင့် scrolling တွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း (@leopardmidiskirt) မေလ ၂၃ ရက်၊ 2019 တွင် 6:09 pm PDT တွင်
Rilka ကဒီလိုပြောတယ် -“ လူတိုင်းကတခြားလူတွေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဆွဲထုတ်ချင်ကြတယ်။
ပျော်စရာကောင်းတယ် ဒါ့အပြင်ငါကပျော်စရာအောင်ဘယ်သူမျှမကအခြေခံခွေးထက်ပိုမိုလွယ်ကူသောကွောငျ့ဖွင့်ကောက်နေရဲ့ထင်ပါတယ်။ ထိုအခါငါတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးသောလမ်းအတွက်ပြောနေပါတယ်။ ငါသည်သူတို့၏ကျားသစ်ပုံနှိပ် midi စကတ်အတွက်လူတိုင်းအဘို့အနထေိုငျတာပါ။
xanax ဘယ်လောက် reddit ဘယ်လောက်
လန်ဒန်ရှိ @estellegpack မှတွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း (@leopardmidiskirt) ၂၀၁၀ မေလ ၂၄ ရက်ည ၈း၅ နာရီ PDT တွင်
Soho တွင် @elizabeth_goodspeed မှတွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း (@leopardmidiskirt) ၂၀၁၃ မေလ ၂၃ ရက်၊ ညနေ ၃း၁၂ နာရီ PDT တွင်
၎င်းသည်မတူညီသောပုံစံ၊ အရောင်၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်လာသည်။
Soho တွင် @lodzgurvz မှတွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း 8:31 pm တွင် PDT မှာမေလ 24, 2019 ရက် (@leopardmidiskirt)
Kanken ကျောပိုးအိတ်နှင့်အတူ! လန်ဒန်ရှိ @honorrosalynd မှတွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း (@leopardmidiskirt) မေလ 23, 2019 တွင် 12:08 pm အချိန် PDT မှာ
နယူးယောက်တွင် @ gurl.jpg မှတွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း 3:19 pm တွင် PDT မှာ, 2019 မေလ 23, 2019 ရက် (@leopardmidiskirt)
Austin ရှိ @heyprilll တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း (@leopardmidiskirt) မေလ ၂၄ ရက်၊
Flatiron ရှိ @ eli.khoury_ မှတွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း 10:58 pm တွင် PDT မှာမေလ 24, 2019 ရက်တွင် (@leopardmidiskirt)
ငါ Leopard Midi စကတ်သမ္မတနိုင်ငံကိုသစ္စာရှိဖို့ကတိပြုပါတယ်။ @etsinthecity မှ Fidi မှတွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း 10:56 pm တွင် PDT မှာဇွန် 8, 2019 ရက်တွင် (@leopardmidiskirt)
Providence တွင် @ b.k မှတွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း (@leopardmidiskirt) မေလ ၂၄ ရက်၊ 2019 တွင်နံနက် 8:30 pm တွင် PDT
နယူးယောက်ရှိ @heyitsvalpal မှတွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း 12:13 pm တွင် PDT မှာ, မေလ 23, 2019 ရက် (@leopardmidiskirt)
Grand Central တွင် @alicehan_ မှတွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း (@leopardmidiskirt) ၂၀၁၃ မေလ ၂၃ ရက်ညနေ ၁၂း၅ နာရီ PDT တွင်
Los Angeles ရှိ @pilarbocq / တွင်တွေ့သည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း (@leopardmidiskirt) မေလ 23, 2019 တွင် 9:45 pm အချိန် PDT မှာ
တစ် ဦး ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့! @elle_jaime အားဖြင့်ရဲရင့်စွာလှုပ်ရှားပါ
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း (@leopardmidiskirt) ၂၀၁၁ မေလ ၂၂ ရက်ည ၈း၇ နာရီ PDT တွင်
မန်ချက်စတာတွင် @princessgeorgina မှတွေ့ရှိသည်
မျှဝေသည် ကွမ်းခြံကုန်း 11:34 pm တွင် PDT မှာမေလ 23, 2019 ရက်တွင် (@leopardmidiskirt)
• Leeds ရှိအစိမ်းရောင် puffa ကို ၀ တ်ထားသောမိန်းကလေးများ၏ဓာတ်ပုံများအတွက်တစ်စုံတစ်ယောက်က Instagram ကိုထူထောင်သည်
• FlareMax ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း - အေးမြသောမိန်းကလေးအုပ်စု၏ဤနွေရာသီ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်